रौतहट-मधेशलाई छुट्टै राज्य बनाउने विवादस्पद अभिव्यक्ति दिँदै आएका डा. सिके राउतलाई रौतहट प्रहरीले आइतबार दिउँसो गौरमा पक्राउ गरेको छ । स्वतन्त्र मधेसको वकालत गर्दै आएका डा. राउतलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले पक्राउ गरेको हो ।
जिल्ला अदालत रौतहटमा नियमित पेशीमा उपस्थित भएर घर फर्किने क्रममा जिल्ला प्रहरी कार्यालय नजिकबाट उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । राज्यविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएकाले उनलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका प्रहरी उपरीक्षक केदार ढकालले जानकारी दिए । अदालतमा राउत करिब एक सय समर्थकसहित उपस्थित भएका थिए । राउतलाई राज्यविरूद्घको अपराधमा मुद्दा चलाइने प्रहरी उपरीक्षक ढकालले जानकारी दिएका छन् ।